“Anfield waa garoon aad u adag, dhinaca kale waxaan nasiib ku lahaa goolkii aan dhaliyay” – Messi – Gool FM
“Anfield waa garoon aad u adag, dhinaca kale waxaan nasiib ku lahaa goolkii aan dhaliyay” – Messi
Dajiye May 2, 2019
(Yurub) 02 Maajo 2019. Kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa xaqiijiyay in kooxdiisa ay awood u lahayd inay dhaliso goolal intaas ka sii badan kulankii ay xalay la ciyaareen Liverpool.
Lionel Messi oo ciyaartii xalay 2 gool ka dhaliyay ayaa carabka ku adkeeyay inaysan wali kulankan go’aaminin, inkastoo ay guul ku gaareen 3-0.
Kooxda Barcelona ayaa guul muhiim ah kaga gaartay kooxda Liverpool kulanka lugta koowaad ee wareega afar dhamaadka tartanka Champions League, kaddib ciyaar ku dhamaatay 3-0, taasoo ka dhacday garoonka Camp Nou.
“Waxaa jirtay fursad aan ku dhalin gaarnay goolka afaraad ee ciyaarta, 4-0 ayaa ka fiican marka loo fiiriyo 3-0, laakiin si walba ay ahaato waxaan gaarnay guul muhiim ah, balse wali lama go’aaminin ciyaartan”.
“Waxaan aadi doonaa garoon ay adag tahay inaan ku badino, isla markaana cadaadiskiisa uu badan yahay, balse waxaan ku faraxsanahay natiijadii aan gaarnay”.
Messi ayaa dhinaca kale ka hadlay goolkii cajiibka ee laadka xurta ahaa uu xalay ka dhaliyay kooxda Liverpool wuxuuna yiri:
“Wuxuu ahaa gool cajiib ah, waxaan raadiyay goolkan, balse nasiibka ayaa iga saaciday in kubadda ay dhex degto shabaqa, waana ku faraxsanahay”.
Maxaa xalay ka Careysiiyay Messi oo uu u aamusiyay Taageerayaash Barcelona!!???
Waxyaabihii laga bartay kulankii xalay ay Barcelona guuldarrada dusha u saartay kooxda Liverpool... (Messi oo barbareeyey CR7)